သွေဖည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများ - ပရော်ဖက်ဆာ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါး၊ "သူတို့ မလွှဲသာမရှောင်သာ၊ တုံ့ပြန်ချက်" Shabbat P. P. Akef ဖြည့်စွက်စာ - ဆက်ပြီး ကော်လံ (ကော်လံ ၂၆) - အရှင်ဘုရား မိုက်ကယ် အေဗရာဟမ်
သွေဖည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများ- ပရော်ဖက်ဆာ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါး၊ “သူတို့ မလွှဲသာမရှောင်သာ”၊ Shabbat P. P. Akev - ဆက်လက်ရေးသားသည့် ကော်လံ (ကော်လံ ၂၆)
8 မှတ်ချက်များ	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
ကော်လံတစ်ခုတွင် ယခင် ယခုနှစ် (XNUMX) ကြောင့် Makor Rishon P. ၏ Shabbat ဖြည့်စွက်စာတွင် ပါမောက္ခ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါးကို မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်အောက်ရှိ talkbacks တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါမည်။
ပရော်ဖက်ဆာ Yuval's နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်ချက်ကို Shabbat supplement P. Ra'a (နှင့်အတူ အတိုကောက်ဗားရှင်းဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ်မှတ်ချက်များ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက သူတို့အားလုံး ဖတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ် )။ ဒီမှာ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ငါ့စကားလုံးတွေ
သွေဖည်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများ
(ပါမောက္ခ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါး၊ "သူတို့ မသွေဖည်ခြင်း"၊ Shabbat ဓာတ် P. Akev)
ပါမောက္ခ Yuval Luca ၏ဆောင်းပါးတွင် လေးနက်သောတန်ဖိုးများနှင့် အချက်အလက်များကို ရောနှောထားသည်။ ဤထူးခြားချက်သည် ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသော ကွယ်လွန်သူ အဖိုး၏ခြေရင်း၌ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ၎င်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် သနားစရာကောင်းပါသည်။
သူ၏ မှတ်ချက်များသည် မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်ပေါ်တွင် ရပ်တည်နေသည်- ၁။ ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအတွက် စံပြတစ်ခု။ 1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသွေဖည်ခြင်း၏ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (လူတစ် ဦး လုံးကို မချစ်နိုင်)။ သိပ္ပံနည်းကျ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်များ- လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည် ရွေးချယ်မှု၏ရလဒ်မဟုတ်သော်လည်း သဘာဝကျသောနောက်ခံတစ်ခု၏ရလဒ်မဟုတ်ဘဲ၊ ပြောင်းလဲရန်အလွန်ခက်ခဲပြီး ကြိုးစားရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် အတိုချုပ်အားဖြင့် ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်- 2. Yuval အဆိုပြုသည့် မော်ဒယ်သည် မှားယွင်းနေသည် (မွန်းတည့်နေ ဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ) နှင့် ဤနေရာတွင် ဆွေးနွေးမှုနှင့်လည်း မသက်ဆိုင်ပါ။ 3. စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်လည်း မသက်ဆိုင်ပါ။ 1. ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးခွန်းများသည် ဆွေးနွေးမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ အခု အသေးစိတ်ပြောပြမယ်။
တစ်ခါက Bnei Brak မှာရှိတဲ့ kollel မှာထိုင်ပြီး ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီလာပြီး ဖန်ခွက်က အရည်လား အခဲလားလို့ မေးတယ်။ Shabbat glass ၏ နိယာမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရူပဗေဒပညာရှင်များက ၎င်းအား ၎င်းတို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လိုအပ်ချက်အတွက် အရည်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရောဂါကုထုံးသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ခြင်းအား လူတစ် ဦး လုံးကိုမချစ်မနှစ်သက်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဆိုလျှင်၊ သူတို့၏ရှက်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော် Halacha သို့မဟုတ် အကျင့်စာရိတ္တသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား အဘယ်ကြောင့် စံနှုန်းအဖြစ် ကျင့်သုံးသင့်သနည်း။ ထို့အပြင်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် လက်တွေ့ကျသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမဟုတ်သောကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော လူပြိန်းအပေါ်တွင် အကျိုးမရှိပေ။ စိတ်ရောဂါသည်များသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုအပ်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့၏ အယူအဆများကို သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် စံမေးခွန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ Michel Foucault က စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် တန်ဖိုးယူဆချက်များနှင့် ပြည့်နှက်နေကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒရဲ့ ရှေ့ပြေးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သူပြောတာမှန်တယ်။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ် ရပ်နေသော နာရီတစ်လုံးသည် အချိန်မှန်ကို ညွှန်ပြသည်။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ ဇစ်မြစ်ကို စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်က အများဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အခြားနောက်ခံရှိပါသလား။ ကုသလို့ ရနိုင်လား ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကုသမှုတစ်ခုစီရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေလဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆုံးအဖြတ်တွေဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာ ဗဟုသုတရှိတယ်ဆိုတာ (ဒါက သေချာပေါက် မပြည့်စုံပါဘူး၊ Yuval ရဲ့ စကားနဲ့ လုံလောက်တဲ့ ငါ့အမြင်အရတော့ မပြည့်စုံပါဘူး) ကျွမ်းကျင်သူက သူတို့ကို အဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းသည် သွေဖည်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံသင့်သနည်းဟူသော မေးခွန်းသည် ကျွမ်းကျင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်သော စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု၏ ကိစ္စဖြစ်သည် (အထက်ပါဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ)။
တစ် စိတ်ရောဂါကုပညာရှင်ငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအပေါ် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် Yuval မှ အကြံပြုထားသော ရှင်းလင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်မိသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ အဓိကအားဖြင့် တန်ဖိုးတွေ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်း (ကလေးငယ်ကပင် သဘောတူသည်) ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို သွေဖည်မှုအဖြစ် မမြင်ပါ။ ဤနေရာတွင် စိတ်ရောဂါကုခြင်းသည် လူမှုရေးတန်ဖိုးများဖြင့် ဆွဲငင်ကာ အခြားနည်းလမ်းမဟုတ်ပေ။ kleptomania ကိုစဉ်းစားပါ။ ၎င်းတွင် မျိုးရိုးဇစ်မြစ်ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းကို မပြောင်းလဲနိုင်သော (အသွင်ပြောင်း) ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ယူဆကြပါစို့။ kleptomania သည် သွေဖည်ခြင်းမဟုတ်ဟု ဆိုလိုပါသလား။ ခိုးယူခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် kleptomaniac ကို မတရားသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ခိုးယူလိုစိတ်ရှိလျှင်ပင် ထိုသူသည် အမှန်တကယ်ခိုးယူသည်ဟု မဆိုလိုသော်လည်း (လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအကြောင်း Yuval ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း) ၎င်းကိုပင် ကုသ၍မရနိုင်သည့်အပြင် မျိုးရိုးဗီဇ သို့မဟုတ် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များပါရှိသည် (ကျွန်တော်ယူဆထားသည့်အတိုင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း)။ kleptomania နှင့် လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကြား ခြားနားချက်မှာ ယနေ့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်အများစုသည် လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို ခွင့်ပြုပြီး အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ခိုးယူခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏မျက်လုံးများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါတွေက တန်ဖိုးတွေမဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်တွေဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရှင်းပါတယ်။
ခ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တစ်ခုတွင် နှလုံးခုန်နေသော လုံးဝသေဆုံးသူအား လိမ်ညာနိုင်သည်ကို "ပညာတတ်ဘာသာရေးရှိသူတိုင်း" သိရှိကြောင်း Yuval က ရေးသားခဲ့သည်။ ငါက တော်တော် ပညာတတ် ( ဘာသာရေး လည်း ကောင်းတယ် ) လို့ တွေးပြီး အဲဒါကို ငါ တကယ် မသိပါဘူး။ ထို့အပြင် သူကိုယ်တိုင်ပင် မသိ။ သေခြင်းနှင့် ဘဝ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် စံနှုန်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မဟုတ်သောကြောင့် ပညာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိနေလဲ၊ ပုံမှန်ဘဝကနေ ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သောလူသည် အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေ သေသည်ဖြစ်စေ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ၊ သူသည် ကိုယ်အင်္ဂါများကို လှူဒါန်းနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတိအကျ မသိနိုင်ပါ။ (ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရတော့ သက်ရှိထင်ရှားရှိသူဟု သတ်မှတ်ခံရလျှင်ပင် သူ့အပေါ်တွင် ခွင့်လွတ်၍ပင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆောင်းပါးများကို ကြည့်ပါ။ Kt)။ ဒါတွေအားလုံးဟာ တန်ဖိုးရှိပြီး အစစ်အမှန်မေးခွန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့ ဆရာဝန် အမျိုးမျိုး က လူပြိန်းတွေ မှာသာ မဟုတ်ဘဲ တန်ဖိုး နဲ့ အချက်အလက် တွေ ရောနှော နေတဲ့ အရိပ်အယောင် တွေပါ။
ပရော်ဖက်ဆာ Yuval သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ယေဘူယျတုံ့ပြန်မှုကို ပေါင်းထည့်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဤအရာကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ချက် (နှင့် ဒေါက်တာ Azgad Gould) အတွက် တိကျသော တုံ့ပြန်မှု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ သူ့ website မှာ ဒါက သူ့ဘာသာစကား
အရှင်ဘုရား ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အေဗရာဟမ်ကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။
အရှင်ဘုရား ရှလုံနှင့် ဘရာချာ၊
ဦးစွာ၊ အောက်ဖော်ပြပါသူများသည် သင်နှင့် သင့်အလုပ်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြောင်း သိပါ။ မင်းရဲ့ Torah နဲ့ halakhic အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ Torah လောကထဲမှာ ငါနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါနားလည်တဲ့ အာရုံကြောဇီဝဗေဒနဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေက မင်းရဲ့ "Science of Freedom" စာအုပ်ကို အရမ်းနှစ်သက်ဖို့ လုံလောက်တယ် မူရင်းနှင့် လှပသော အတွေးအမြင်နှင့် နယ်ပယ်အတွက် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခု။
မင်းရဲ့စာအုပ်ကို ငါနှစ်သက်တာ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် "မသွေဖည်ဘူး" ဆောင်းပါးတွေကနေ မင်းရဲ့ ကျေနပ်လောက်စရာ တုံ့ပြန်မှုကနေ ရှင်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သော တိုးတက်မှုအချို့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စကားများ မှန်ကန်ကြောင်း သင့်အား ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားရန်နှင့် မယုံကြည်ပါက၊ အနည်းဆုံး သင်၏တောင်နှင့် တောင်ကြားရှိ တံတားတစ်စင်းကို စတင်တည်ဆောက်ပါ။ ငါ့တောင် မင်းနဲ့ငါ သဘောတူထားတဲ့အရာတွေနဲ့ စလိုက်ရအောင်။
Michelle Foucault အကြောင်းကို နှစ်ကြိမ် (တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘဲ) သဘောတူပါတယ်။ ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်ခုလုံးက ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သော ဗလာစာသားများဖြစ်ပြီး စိတ်ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကံမကောင်းစွာပင် သူသည် အလွန်မှန်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ငါယုံကြည်တယ်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို မင်းသဘောတူမှ ငါမသေချာဘူး- အဲဒါဟာ သဘာဝအရ စိတ်ရောဂါရှာဖွေရေးမှာ အကျုံးဝင်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ ယူဆချက်ကနေ ခွဲထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မကြာမီကာလအတွင်း ထို့ကြောင့် တွေးခေါ်ပညာရှင်သည် တတ်နိုင်သည် - တန်ဖိုးများနှင့် အချက်အလက်များကြားတွင် ပြတ်သားစွာ ခွဲထုတ်ရန် စိတ်ရောဂါသည် မတတ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် သူသည် သူ့နယ်ပယ်တွင် ရှိနေသည် သို့မဟုတ် တည်ရှိနိုင်သည်ဟူသော သူ့ကိုယ်သူနှင့် လူအများကို လှည့်ဖြား၍ မရပေ။ အဲဒါကို နောက်မှ ပြန်ပြောမယ်။
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ စိတ်တွေ ရပ်တန့်သွားပြီး သူ့နှလုံးခုန်နေချိန်မှာ ထပ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မင်းရဲ့ ပြတ်သားစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကိုလည်း ငါသဘောတူပြီး မင်းရေးထားတဲ့ အခန်းမှာ ရေးထားတဲ့ အရာတွေကနေ အသစ်တစ်ခုကိုတောင် ငါသင်ယူခဲ့တယ် သင့်တုံ့ပြန်မှုတွင် အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များ။ ထို့အပြင်- မင်းရဲ့နောက်ဆုံးကောက်ချက်က ဒီလူရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို လှူဒါန်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်- ငါနဲ့အတူတူပဲလို့ ငါဝမ်းသာတယ်။ အစွန်းရောက်သြသဒေါက်စ်နှင့် အမျိုးသားဘာသာရေးဘာသာရေး ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အချို့၏ မသိနားမလည်သူများနှင့် သစ္စာမဲ့သူအချို့၏ သဘောထားကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် Bnei Torah အကြား သင်၏အဆင့်အတန်းနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဆက်လက်အသုံးချနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် "အသက်ရှင်ခြင်း" နဲ့ "သေခြင်း" ကွာဟချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး "မလွဲမသွေ" နဲ့ "မဖောက်ပြန်ဘူး" တို့ရဲ့ ခြားနားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်းဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကျွန်ုပ်၏စကားများကို ရှင်းပြပါမည်- ပထမ၊ သင်ရေးသောစာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ဆရာဝန်နှင့် အခြားလူတစ်ဦးသည် အသက်ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းရှိမရှိကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း။ ဒီပထမလက်ကို ငါသိတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်အဖြစ် အတွင်းလူနာဌာနမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက ညဘက်မှာ သေဆုံးသွားတဲ့ လူနာတွေရဲ့ သေဆုံးမှုကို အစပိုင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ။ နောက်ဆုံးခရီးစဥ်အစကို ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ အိမ်အကူအိမ်အကူတွေ ရောက်လာဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ စာရွက်တွေနဲ့ ဖုံးထားခဲ့တဲ့ မျက်နှာများစွာကို ဒီနေ့အထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
သို့သော်လည်း မည်သူသည် "အသက်ရှင်သည်" နှင့် "သေ" သည်ဟူသော ဟာလခ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်နှင့် ကွဲလွဲနိုင်သည် ဟု ဆိုသောအခါ သင်မှန်သည်ကို ကျွန်ုပ် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သို့သော် စိတ်ရောဂါကုထုံးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (အမှန်တကယ် လူမှု-ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) သွေဖည်ခြင်း (အမှန်တကယ် လူမှု-ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်) တို့သည်လည်း ဆက်စပ်မှုမရှိဟု သင်၏တုံ့ပြန်မှုမှ သွယ်ဝိုက်သောကောက်ချက်ချခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်တွင် အဖြစ်မှန်ကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။
သင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သင်ပြုစုခဲ့သည့် kleptomania ကိုယူကြပါစို့။ Kleptomania သည် သွေဖည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိတ်မူမမှန်တာလား။ သွေဖည်ခြင်းဟူသော အသုံးအနှုန်းကို စိတ်ရောဂါကုပညာတွင် သီးသန့်ထားရှိပြီး၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူအတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအတွက် စံနှုန်းသွေဖည်ခြင်း (a.k.a. standard deviation) ၏ သင်္ချာနှင့် တန်ဖိုး-ကြားနေ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ကို အသုံးချရန် သင်မကြိုးစားပါနှင့်။
စိတ်ရောဂါကုသရေးသည် "အပြုအမူ" နှင့်သာမက ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိဖြစ်စဉ်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ မင်းရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ငါဒီမှာမင်းသဘောတူလို့ ဝမ်းသာလိုက်တာ၊ kleptomaniac က kleptomaniac ဖြစ်ဖို့ တကယ်ခိုးစရာမလိုပါဘူး၊ လိင်တူဆက်ဆံသူဟာ လိင်တူချစ်သူဖြစ်ဖို့အတွက် ယောက်ျားကိုလိမ်စရာမလိုပါဘူး။ သို့သော် ဤတွင် ပုံဥပမာနှင့် ပုံဥပမာကြား နိယာမကို အဆုံးသတ်ထားသည်။ Kleptomaniac သည် သူ၏အပြုအမူတွင် အခြားသူများကို ထိခိုက်စေပြီး ထိခိုက်စေသောကြောင့် သူ၏အပြုအမူသည် မှားယွင်းနေသည် (သွေဖည်ခြင်းမဟုတ်) နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ၎င်းအား ခုခံကာကွယ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ခိုးယူပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းပါက တရားရုံးတွင် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး စီရင်ချက်ချသည့်အဆင့်တွင်သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များမဟုတ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို မလိမ်ညာပါက၊ လိင်တူဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ Torah ၏တားမြစ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်နေရသော အခြားဂျူးအမျိုးသားများနှင့် မည်သို့ကွာခြားသည်ကို သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။
စိတ်ရောဂါကုပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်များကို လုံးလုံးလျားလျား ခွဲခြား၍မရသော တန်ဖိုးများကို ကျွန်ုပ်ပြန်သွားပါ။ ခရစ်ယာန် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် များသည် မိတ်သဟာယ မုန့် ကို ရရှိ ပြီး စားသုံး သော မုန့် သည် မေရှိယ ၏ ခံတွင်း ၌ စစ်မှန်သော အသား ဖြစ်လာ ကြောင်း ယုံကြည် သည် ။ ၎င်းသည် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးအတွက် မှားယွင်းသော အတွေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူမှုရေးနှင့် တန်ဖိုးစံတစ်ခုကြောင့် စိတ္တဗေဒ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှ သွေဖည်သွားသည် - လူသန်းပေါင်းများစွာက ၎င်းကို ယုံကြည်ကြသည်။ ဤအရာသည် အသေးအဖွဲ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း စိတ်ရောဂါကုထုံးသည် ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိဖြစ်စဥ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေခံကို အမှောင်ထဲတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စူးစမ်းရှာဖွေနေပါသည်။
ရူပဗေဒဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းသော ခြေနင်းများပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ထားနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ပျော်ရွှင်မိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တစ်သက်တာတွင် မည်သည့်အခါမျှ ဖြစ်မလာတော့မည်ကို စိုးရိမ်ပါသည်။ ငါ့ထံမှ ပိုသိသည်နှင့်အမျှ ဤပြဿနာကို အရင်းခံသည့် အခြေခံဒဿနမေးခွန်းမှာ ကျေနပ်လောက်ဖွယ် အဖြေမရှိဟု ထင်ရသည့် စိတ္တဗေဒ အကြောင်းရင်းခံ၏ မေးခွန်းဖြစ်သည်၊ တစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် နှစ်လမ်းလား သို့မဟုတ် ယင်းပြဿနာနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။ အားလုံး? မင်းပြောခဲ့တဲ့ ငါ့အဖိုးက မင်းလိုပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းခံတွေနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ အဲဒါအတွက် အဖြေမရှိဘူးလို့တောင် ယုံကြည်ခဲ့တယ် (Ignorbimus - ငါတို့ မသိသလို ငါတို့လည်း ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်ဘူး)။ ဒီနေရာကို ဟန်ဆောင်ပြီး ထူထဲအောင်မကြိုးစားဘဲ၊ ဒီနေ့မှာ အဖြေမရှိဘူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ သူ့ကျောင်းသား ပါမောက္ခ Yosef Neumann ရဲ့ သဘောထားကို တကယ်ထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် (Ignoramus - ငါတို့မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ သိနိုင်မှာပါ။)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒဿနအမြင့်ကနေ ဘာသာရေး လိင်တူဆက်ဆံသူတွေရဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာကို ပြန်သွားချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူကောင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့ မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Rabbi Levinstein ရဲ့စကားအတိုင်း ငါ့ဆောင်းပါးကို ရေးခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသော လက်တွေ့ကျသောမေးခွန်းမှာ သင်၏တုံ့ပြန်မှုတွင် တိုက်ရိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအကိုးအကားကိုမတွေ့ခဲ့ရခြင်း (ထိုကဲ့သို့သောကိုးကားချက်ကို ကျွန်တော်မျှော်လင့်သည်) မှာ ဘာသာရေးလိင်တူဆက်ဆံသူများကို အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပေးရန် နည်းလမ်းရှိမရှိ၊ ဘာသာရေး ဇီယွန်ဝါဒီ အသိုင်းအဝိုင်းမှ မိသားစုများ။ ယောကျ်ားကို မလိမ်ညာတဲ့လူတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ဒါက halakhic ထက် ပိုလူမှုရေးမေးခွန်းတစ်ခုလို့ ကျွန်မရဲ့ နှိမ့်ချယူဆချက်ပါ။ ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ၊ သင်၊ ကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားလုံးသည် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Albert Einstein ၏ဆိုရိုးစကားအား မှတ်သားထားသင့်သည်- "စိတ်စွန်းကွက်မှုကို ဖြိုခွဲရန်ထက် အလင်းအမှောင်တစ်ခုကို ဖြိုခွဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်"
ပြီးတော့ သူ့စကားအပေါ် ကျွန်တော့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ဒီမှာ:
လေးစားအပ်ပါသော ပါမောက္ခ Yuval၊ မင်္ဂလာပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ မင်းက ငါ့ရဲ့ နံပါတ်တွေကို နှစ်သက်ခဲ့ပြီး ဒီမှာ မင်းရဲ့ လေးမြတ်မှုကိုတောင် ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သေချာတာကတော့ ငါ့အတွက် မလွယ်ဘူး။
အမှန်တော့၊ ဆောင်းပါးမှာ မင်းပြောတာကို ငါသဘောမတူဘူး၊ ငါမကြိုက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပေမယ့်၊ ထုံးစံအတိုင်း ရေးထားတာတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လှတယ်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ "တိုးတက်မှုများ" ပြီးဆုံးပြီးနောက်တွင်ပင် (သင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်း) ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့ကို သဘောမတူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤနေရာတွင် ရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါမည်။
Foucault (ဒုတိယအချက်ကိုဆိုလိုသည်) ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါက၊ စိတ်ရောဂါကုထုံးသည်တန်ဖိုးယူဆချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့အပေါ်တွင်အဓိကအခြေခံသည်ဟူသောပထမဘုံနိဂုံးတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ၎င်းတွင် အမှန်တကယ် အတိုင်းအတာတစ်ခုလည်း ရှိသည်၊ သို့သော် အဓိကအချက်မှာ တန်ဖိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ အမြဲလိုလို ပါဝင်နေပါသည်။
ဤကိစ္စရပ်ကို သင်သဘောတူသဖြင့်၊ ရဗ္ဗိနှင့် စိတ်ရောဂါသည် ပညာရှင်နှင့် ရဗ္ဗိအကြား ဆက်ဆံရေးပုံစံ၏ စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု သင်မည်သို့ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ် မမြင်ပါ။ စိတ်ရောဂါကုပညာက ၎င်းကို သွေဖည်မှုတစ်ခုအဖြစ် မမြင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူဆဲဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် ရဗ္ဗိသည် ဤအရာကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် အဘယ်ကြောင့် လက်ခံသင့်သနည်း။ သူရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သူ့ရဲ့ halakhic ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စွမ်းအားတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ရဗ္ဗိဆရာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦး၏ စံနမူနာအတွက်၊ ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုတွင် သင်သည် ကျွန်ုပ်ကို ရည်ညွှန်းပြီးဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးအတွက် ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ ကိစ္စပါ။ နေ့လယ်တွင် m.
ရှောင်လွှဲလို့ မရဘူးလို့လည်း သင်ပြောခဲ့တယ် (အဲဒီရောဂါကုထုံးက တန်ဖိုးတွေကို အချက်အလက်တွေနဲ့ ရောထွေးစေလိမ့်မယ်)။ ကျွန်တော်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါကို သဘောမတူဘူးလို့ ပြောနေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်ုပ်မှားပါက ကျွန်ုပ်အား ပြင်ပေးပါ၊ သို့သော် စိတ်ရောဂါသည် ဖြစ်ရပ်မှန်များ (အကျယ်ပြန့်ဆုံးသဘောအရ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့အား သဘာဝသိပ္ပံပညာတွင်ကဲ့သို့) ရှင်းပြသော သီအိုရီများအပါအဝင်) နှင့် အခြားဘာမျှ အာရုံစိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူမသည် လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏ဇာစ်မြစ်ကို မှန်မှန် ကန်ကန်ရောင့်ရဲနေနိုင်သည် (ကျွန်တော့်အတွက်မူ ၎င်းသည် သင်ဆန္ဒအတိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှန်းဆချက်များလည်း ပါဝင်သည်၊ ဤအရာများသည် တန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကို ရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည့် သီအိုရီများဖြစ်နေသရွေ့၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည် (ibid.)၊ ပျံ့နှံ့နေသည့်နေရာ၊ ဤအရာသည် မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ နှင့် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုပုံစံ (သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်သော "ပြောင်းလဲခြင်း") ၏စျေးနှုန်းသည် အဘယ်နည်း။ ဤမေးခွန်းများသည် အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည့် မေးခွန်းများဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် တရားဝင် သိပ္ပံနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးခွန်းများဖြစ်သည်။ ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးကို အခကြေးငွေနဲ့ မကောက်ခံဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၎င်းသည် သွေဖည်ခြင်းရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်း၏အတွင်းလူတိုင်းကို ချန်ထားခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် "သွေဖည်ခြင်း" ဟူသော အယူအဆကို ကိန်းဂဏန်းစံနှုန်း ("သင့်ဘာသာစကားဖြင့် "ကြားနေသွေဖည်ခြင်း" အနေဖြင့်) ကျွန်ုပ်၏အချက်ကို ဖော်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် စိတ်ရောဂါကုသည် ဤအရာကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ သို့သော် ဤနေရာတွင် သင်၏ မှတ်ချက်တွင် သဘောတူထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါက ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ဤနေရာသို့ ပြန်လာကာ ဝေါဟာရသွေဖည်မှုတွင် ကျွန်ုပ်၏အသုံးဝင်မှုကို ပြုပြင်ပေးကာ နေ့စဉ်သုံးအတွက် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် ထပ်မံကြိုးစားနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်များရှိ အသုံးများသောအသုံးပြုမှုတွင် သွေဖည်မှုသည် ပြင်းထန်သော (မွေးရာပါ?) ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သဘောထားမျိုးဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူထားသည့် kleptomania ၏ဥပမာကဲ့သို့၊ “သွေဖည်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းမှလွဲ၍)။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း၊ ဤသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အရှင်ဘုရား Levinstein နှင့် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ကျိုးငယ် (အရာအများစုအပေါ် သူ၏အမြင်နှင့် အလွန်ဝေးကွာသော) သည် ၎င်းကို ကျွမ်းကျင်သောအခွင့်အာဏာကို ရယူရန် နေရာမရှိဟု သဘောတူပါသည်။ အယူအဆ၏ ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတွင် လိင်တူဆက်ဆံခြင်း ပါ၀င်သည်ဆိုခြင်းကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင် တွေးထင်လေ့မရှိပါ (ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် သွေဖည်ခြင်းသည် အကျင့်ပျက်သော သဘောထားဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးသဘောအရ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် သဘောထားမဟုတ်သောကြောင့်)။ အရှင်ဘုရား လီဗင်စတိန်းရဲ့ အမြင်ကတော့ ဟုတ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် (သူ့ရဲ့အမြင်အရတော့ ဘာသာရေးအရ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သဘောထားဟာ သွေဖည်သွားတာကြောင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဟာလခကို သီလနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေလိုင်း၊ အမေရိကန် စိတ်ရောဂါကုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ပညာရှင်အသင်းအဖွဲ့မှ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ကုသသင့်သည်နှင့် အဘယ်အရာသည် မဖြစ်သင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြောင်းပြချက်မရှိဟု ကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်။ ဒါကို လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ၊ လူတစ်ဦးစီအတွက်၊ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် (သူတို့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်) ကိုလည်း ချန်ထားသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ- လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် အခြားသူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အရာ (kleptomania, pedophilia, etc.) ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ပြီး လူနာသည် ၎င်းအတွက် ဆန္ဒမပြသေးလျှင်ပင် ကုသရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေး ထိခိုက်မှု မရှိသော ကိစ္စများတွင် လူသည် ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်သည် ရှိ/မရှိကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ သေချာတာကတော့ သူလှည့်လာတဲ့ (အသင်းအဖွဲ့မဟုတ်) စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်က သူ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေကြောင့် ဒီကိစ္စကို ကုသဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထိုသို့သောကိစ္စရပ်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု၏ စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် နေရာမရှိဟု ကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်။
ဤပုံသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်တွင် အဘယ်ကြောင့်ရှိနေသည်ကို သေချာရှင်းလင်းစေပြီး စိတ်ရောဂါကုထုံးတွင် တန်ဖိုးအတိုင်းအတာများကို မိတ်ဆက်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဤပုံစံတွင် ကျွန်ုပ်၏နားလည်မှုအရှိဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းကိုရှောင်ရှားသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ စိတ်ရောဂါသည် ရူပဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် ဒဿနိကပညာရှင်ကဲ့သို့ပင် တန်ဖိုးများနှင့် အချက်အလက်များကို သေချာပေါက် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သောကြောင့် ဤစကားလုံးများဖြင့် အမှားလုပ်မိနိုင်သည်ကို သံသယရှိစရာမလိုဘဲ၊ ကျွန်ုပ်အား ပြုပြင်ပေးမည်ဆိုပါက ဝမ်းသာပါသည်။
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် လဲလျောင်းနေသူတစ်ဦး၏ နှလုံးခုန်သံနှင့် နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့သည့်အခါတွင်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါ့အမြင်မှာ မှားပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အတိုက်အခံတွေက မင်းပြောသလိုပဲ "မသိဘဲ" မဟုတ်ဘူး။ အမှန်တော့၊ ဒါတွေဟာ အချက်အလက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အသိပညာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဝေါဟာရကို သူတို့နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး သုံးတာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ သူတို့ဟာ အကျင့်စာရိတ္တ မှားယွင်းပြီး အဲဒါတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။ တဖန်၊ တန်ဖိုးများနှင့် အချက်အလက်များကို ပိုင်းခြားရန် သတိထားရန် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပြန်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သမားတော်သည် ဤမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထပ်လောင်းတန်ဖိုး မရှိပါ။
ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို လက်တွေ့မှာ ဆရာဝန်တွေဆီ လွှဲအပ်ကြောင်း မင်းရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်က အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ခြင်းမှလွဲ၍ ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဖိုးတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထပ်ပြီး မရောထွေးပါနဲ့။ သေခြင်းတရားကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆရာဝန်များထံ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း (ဆရာဝန်အဖြစ် သင့်ဦးထုပ်၌ သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း)၊ သို့သော် ၎င်းသည် လက်တွေ့ကျသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤသည်မှာ အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ထိရောက်မှု အတွက်သာဖြစ်ပြီး အမှန်မှာ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အတိုချုံ့ပြီး ချောမွေ့စေရန်အတွက်သာ ဆရာဝန်ထံ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ အာဏာလွှဲအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေတွင်လူတစ်ဦးတွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အသက်ပြန်ရှင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် သူသေသည်ဟုယူဆခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဖြူစင်သောတန်ဖိုးရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သူမသည် အဖြစ်မှန်များနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။ သင်ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အသက်နှင့်သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ halakhic ဆုံးဖြတ်ချက်သည် "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် မတူပါ။" ငှက်ကုလားအုတ်သည် အသက်ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်” ကဲ့သို့သောအရာမျိုးမရှိပါ။ ဤသည်မှာ သန့်စင်သောတန်ဖိုး (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုသည် ကွဲပြားခြားနားသော စံနှုန်းများ (အမှန်တရားထက်) အမျိုးအစားများဖြစ်သောကြောင့် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည် halakhic တစ်ခုနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
လိင်တူဆက်ဆံသူများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝသဘောတူပါသည်။ ဒါပေမယ့် လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ (သူတို့ရဲ့သဘောထားကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးတဲ့) လိင်တူဆက်ဆံသူတွေဟာ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ အသေအချာ သဘောမတူပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များသည် ရာဇ၀တ်မှုမဟုတ်ကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို မထိခိုက်စေရန် အခြားသူများကို မထိခိုက်စေရန် ဘာသာရေးစခန်းတွင်းရှိသူများ ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်)။ သို့သော် halakhic နှင့် Torah တို့သည် ရာဇ၀တ်ကောင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာရေးနှင့် halakhic ရှုထောင့်အရ ၎င်းတို့သည် လူသတ် သို့မဟုတ် ဓားပြ၏ တူညီသောသဘောအရ ရာဇ၀တ်ကောင်များဖြစ်သည် (သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်ကောင်များဖြစ်သည်)။ အပြစ်ရဲ့အတိုင်းအတာက တခြားကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဤနေရာတွင် ၎င်းတို့ရရှိထားသော ရွေးချယ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာနှင့် ၎င်းသည် တားမြစ်ချက်ဖြစ်သည် (လောကီသားတစ်ဦးသည် ဤတရားမ၀င်လုပ်ရပ်ဟု မယူဆပါ)။ ပုံမှန်သူခိုးတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကလစ်ပ်တိုမီးယားတစ်ယောက်လိုပါပဲ။
လိင်တူဆက်ဆံသူများကို ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် သင်မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပို၍လွတ်လပ်သည်ဟု သတိပြုမိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ငါ့အတွက်ကတော့ ဒီကိစ္စကို လက်တွေ့ကျကျ သိတဲ့သူတွေတောင်မှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပုထုဇဉ်တွေ ဆက်ဆံခွင့် ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ် (သူက လှိုင်းပုတ်ပြီး တရားမဟောဘူးဆိုရင်၊ တရားတော်အရ ဆိုးသွမ်းတဲ့ တရားဒေသနာပါ)။ ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးသည် အထူးသဖြင့် ကိုင်တွယ်ရခက်ခဲသောအခြေအနေတွင် ရှိနေပါက အသိုင်းအဝိုင်း၏တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းကို အရင်တုန်းက အကျယ်တဝင့်ရေးခဲ့ဖူးပြီး သာဓကအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ. သတင်းစာမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုမှာ ဘာ့ကြောင့် ပေါ်လာတာလဲဆိုတာ ခင်ဗျား အံ့ဩမိပါတယ်၊ ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေအတွက်သာ ကျွန်တော် မှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ ကိစ္စရဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ ကော်လံတွင် ကျွန်ုပ်၏ ရှည်လျားသော တုံ့ပြန်မှု၏ အစကို မြင်ပါက၊ ယခင် ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်၊ သင်၏လက်တွေ့ကျသော ကောက်ချက်အများစုကို ကျွန်ုပ်သဘောတူကြောင်း အတိအလင်း ရေးသားထားသည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ စနစ်က သတင်းစာမှာ တုံ့ပြန်မှုကို သက်တမ်းတိုးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဤနေရာတွင် နောက်ဆုံး ကော်လံနှစ်ခုနှင့် ( talkbacks တွင်) ပြီးနောက် ဆွေးနွေးမှုတွင် "တိုးတက်မှုအချို့" ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ မင်းပြောတဲ့အတိုင်း "ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်" လို့ ကိုးကားထားတဲ့ mimara နဲ့ ငါအဆုံးသတ်လိုက်မယ် (ဒီလို သိပ္ပံဘီလူးကြီးနဲ့ ငါ့နာမည်ကို တစ်ရှိန်ထိုးပြောဖို့တောင် ရှက်မိတယ်)။ စိတ်စွန်းကွက်မှုကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖြိုခွဲရန်မှာ အမှန်ပင် ခက်ခဲသည်။ သို့သော် ကြီးမားသောမေးခွန်းမှာ Didan ကိစ္စတွင် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် မလိုမုန်းထားမှုတစ်ခုဟုတ်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် မတူညီသောတန်ဖိုးရာထူး (မင်းတို့နှင့် ငါ၏သင်တန်းအပါအဝင် တန်ဖိုးတိုင်းသည် သဘောတရားအရ မလိုမုန်းထားမှုဖြစ်သည်)။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအပေါ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များနှင့် လူမှုရေးသဘောထား (ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ Shabbat တွင် လက်မှုပညာကို တားမြစ်ခြင်းမှာ ပြင်းထန်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်) တားမြစ်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ကျွန်ုပ်၏ အမြင်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဘိုးများသာမကဘဲ အစစ်အမှန်ယူဆချက်များကို ဖန်တီးပါသည်။) ဒါပေမယ့် လိင်တူဆက်ဆံတာကို တားမြစ်ချက်အနေနဲ့ ရှုမြင်တာက မလိုမုန်းထားမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ halakhic စံနှုန်းတစ်ခု (ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ကံမကောင်းရင်တောင်)။ ထိုသို့သောစံနှုန်းများ (မည်သည့်စံနှုန်းအတိုင်း) သဘောထားသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီ၏ယုံကြည်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ တိုရဟ်ကို ပေးလှူသူအား တားမြစ်လျှင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ရှိနိုင်သည် (ဆင်းရဲတွင်းနက်၍ သတိမပြုမိ)ဟု ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်ပါသည်။ ငါသည် သူ၏အမိန့်တော်အတိုင်း စိတ်ကို ညွတ်စေ၏။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ယုံကြည်ခြင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကြောင့်၊ စိတ်ရောဂါကုကို ရာထူးမယူချင်ဘူး၊ သေချာပေါက် ပြတ်သားတဲ့သူတွေကို မပေးချင်ဘူး (ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကက်သလစ်ဝမ်းကွဲတွေရဲ့ ပါးစပ်မှာ ဆက်ဆံရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလိုပဲ)၊ ပြီးတော့ ဒီကို ပြန်ရောက်သွားပြန်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် စိတ်ရောဂါကု arrays မှအဆက်ဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငါတို့ရဗ္ဗိဆရာတို့သည် မိန့်တော်မူပြီးပြီ (Ibid., Ibid.)။
 Yoav Sorek ၏ ဆောင်းပါး နှစ်ခုနှင့် အတူ၊ တူညီသော ဖြည့်စွက်စာတွင် နှစ်ပတ် အစောပိုင်းက ထုတ်ဝေသည့် နှင့် Shabbat supplement website တွင် ထုတ်ဝေသည့် တစ်ခု (p. See)၊ ဤသည် အသိဉာဏ် အရှိဆုံးနှင့် အသက်ဆိုင်ဆုံး ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ် ပြောရပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည် စာနယ်ဇင်းများတွင် သို့မဟုတ် ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
သွေဖည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများ- ပရော်ဖက်ဆာ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါးအား တုံ့ပြန်ချက်၊ "သူတို့ မသွေဖည်ခြင်း"၊ Shabbat P. P. Akev ဖြည့်စွက်စာ (ကော်လံ 25)
Torah ၏ 'Hefza' - Rabbi Yehuda Rak ၏ ဆောင်းပါးကို တုံ့ပြန်သည်။
Halacha နှင့် အဖြစ်မှန် - halakhic ကျွမ်းကျင်မှုဟူသည် အဘယ်နည်း
“သွေဖည်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်များ - ပရော်ဖက်ဆာ Yoram Yuval ၏ ဆောင်းပါးအား တုံ့ပြန်ချက်၊ “သူတို့ မသွေဖည်ခြင်း”၊ Shabbat P. P. Akef - အဆက်မပြတ် ကော်လံ (ကော်လံ ၂၆)”
ပထမဦးစွာ၊ စာပေးစာယူနှင့် ဟောပြောချက်၊ ၎င်း၏ လေးနက်မှုနှင့် နိယာမသဘောတူသည့် နိဂုံးချုပ်ချက်များကိုပင် ကျွန်ုပ်တကယ်နှစ်သက်ပြီး သင်ယူခဲ့ရကြောင်း ထောက်ပြလိုပါသည်။
သို့သော်၊ သင်သည် စံနှုန်းမှ သွေဖည်ရုံသာမက ပျက်ကွက်ခြင်း၏ သဘောထားသွေဖည်မှုအဖြစ် သွေဖည်မှုဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် အဘယ်ကြောင့် အခိုင်အမာ တောင်းဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်နားမလည်သေးပါ။ စွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ် ကုသရန် လိုအပ်သည့် စံနှုန်းမှ သွေဖည်မှု အတိုင်းအတာသည် အမှန်တကယ် အဖိုးတန်သော်လည်း ပုံမှန်နှင့် အလွန်သွေဖည်နေခြင်းသည် တရားဝင်ပါသည်။
Foucault ကို ဟောပြောချက်ထဲ ပြန်ထည့်မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် The Madness of the Age of Reason မှာ Foucault က အဲဒါကို အတိအကျ ပြောခဲ့ပြီး တူညီတဲ့ ကောက်ချက်နဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုင်းခြားခြင်းရဲ့ တူညီတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို ရောက်မယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ် (သာမန်မျဉ်းကွေးကနေ အလွန်သွေဖည်သွားတာပါ) နှင့် တန်ဖိုးများ (ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သွေဖည်ခြင်း သို့မဟုတ် ကက်တလောက်တင်ခြင်းသည် အဖိုးတန်သည်)
ဤနည်းဖြင့် သွေဖည်ခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် အတားအဆီးမရှိပါ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် သင့်အတွက် အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက လက်ခံထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်သလို Rabbi Levinstein ရည်ရွယ်ထားတာနဲ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့အရာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ (Yoram Yuval နှင့် ကျွန်ုပ်) သည် ၎င်းကို သင်္ချာနည်းကျနှင့် ကြားနေနည်းဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မဖော်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ နေ့စဉ်သုံး “သွေဖည်ခြင်း” သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အပျက်သဘောဆောင်သည့် စကားစုဖြစ်သည်။ သင်၏အကြံပြုချက်အရ၊ Rabbi Levinstein သည် အသေးအဖွဲနှင့် တန်ဖိုးမရှိသောအရာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဘယ်ကြောင့် ဆွေးနွေးရမည်နည်း။ အမှန်တကယ် လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည် လူဦးရေတွင် လူနည်းစုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ (Rabbi Levinstein နှင့်) အချေအတင် ဆွေးနွေးမှုသည် ၎င်းကို သင့်လျော်သော ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်သည် (ဤနေရာတွင်လည်း Yuval နှင့် ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်၊ ဆွေးနွေးရန် ကျွမ်းကျင်အာဏာပိုင်၏ ဝေါဟာရနှင့် သက်ဆိုင်မှုမှလွဲ၍)။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း၊ ဤနေရာ၌ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအားလုံးသည် တန်ဖိုးလေယာဉ်ပေါ်တွင်ရှိပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်-သင်္ချာနည်းမဟုတ်ပေ။
Foucault မှာ မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကို ငါနားမလည်ဘူး။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် Foucault ကို ဟောပြောချက်သို့ ပြန်သွားပါပြီ (၎င်းအပေါ် အဆိုးမြင်သော ယေဘူယျသဘောထားကို သဘောတူပြီးနောက်) ဤနေရာ၌ သူသည် အမှန်တကယ် မှန်ပါသည် (မတ်တပ်ရပ်နာရီ စသည်ဖြင့်)။ စိတ်ရောဂါရှာဖွေခြင်းသည် တန်ဖိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်များအပေါ် အခြေခံသည်ဟု Foucault ၏ထုတ်ပြန်ချက် (သင်ဖော်ပြထားသောစာအုပ်တွင်) ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးလုံး သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အငြင်းအခုံတစ်ခုမှာ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ဟာ သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဦးထုပ်ကို မဝတ်နိုင်ပါဘူး (ဒါတွေအားလုံးက တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပြီး အချက်အလက်တွေမဟုတ်)လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဤ (ဒါနှင့် ဤမျှသာ) သည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် ငြင်းခုံနေပါသည်။ လုံး၀ ထပ်တူထပ်မျှ ငြင်းခုံခြင်းသည် သေခြင်း၏ အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သမားတော်၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာ၏ ဆက်စပ်မှုကို အကြောင်းပြုပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက တူညီတဲ့ ငြင်းခုံမှုပါဘဲ။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်အားလုံး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပြဿနာမှာ ထိုသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်သာမကဘဲ မိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပါ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အားကောင်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တားမြစ်ထားသောဆက်ဆံရေးကို လူအများအရှက်မရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီး အရှက်ကင်းစွာမြင်နိုင်သောအခါတွင် အဆိုးမြင်သာဓက၏အတိုင်းအတာကို အများသူငှာထည့်သွင်းပြီး အများသူငှာခွင့်ပြုထားသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်၊ အခြေအနေတွင်ရှိနေသော ယောက်ျားလေးများအပေါ် ထိခိုက်စေသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည့် ထုတ်ပြန်ချက်၊ သံသယနှင့် အပျက်သဘောဆောင်သော ဥပမာသည် တားမြစ်ချက်ကို စိတ်ပျက်စေနိုင်သည်။
အစ္စရေးအားလုံးသည် ရောယှက်နေပြီး တစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ပြီး တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့်အရာတွင် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တိုးတက်ရန် အခွင့်ထူးခံနိုင်ပါစေ၊ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို မှန်ကန်စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ပါစေ။
လေးစားစွာဖြင့် S.C. Levinger
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် မည်သည့်တားမြစ်ချက်ကိုမဆို ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သင်္ဘောတွင်းပုံဥပမာအရ၊ အခြားသူနှင့်မပတ်သက်သော ပြစ်မှုများပင်လျှင် မိမိ၏ကံကြမ္မာကို အမှန်တကယ်ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် Torah အားလုံးသည် အကျင့်စာရိတ္တဖြစ်သည်။
တားမြစ်ချက်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ကြောင်း မရှင်းပြပါက၊ ၎င်း၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှု အတိုင်းအတာကြောင့် ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ ဒါက လူမျိုးစုရဲ့ တင်းတိမ်မှုပါ။
SD XNUMX တွင် Elul XNUMX ဖြစ်သည်။
အရှင်ဘုရား Avraham Neru - မင်္ဂလာပါ၊
ဧကန်စင်စစ်၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်၏ လွန်ကျူးမှုအားလုံးသည် အကျင့်ယိုယွင်းကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ 'အိမ်ရှင်' ဖြစ်ခြင်းမှ လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ကျေးဇူးတော်အတွက် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လည်းကောင်း ဖန်ဆင်းရှင်၏ ဂုဏ်အသရေကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျန်းမာသောမိသားစုဘဝတည်ဆောက်ရန် မြှင့်တင်ပေးသည့် တားမြစ်ချက်အများအပြားမှာ ဗီဇအားဖြင့်သာမက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့် ကရုဏာတန်ဖိုးများဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် မိဘနှင့်အဖ အချင်းချင်း အကျိုးပြု၍ အဆုံးမရှိ စိုက်ထုတ်နိုင်သော သီလ၊ မေတ္တာနှင့် ဆည်းကပ်မှု။
သို့သော် ဖန်ဆင်းရှင်၏ဂုဏ်အပြင်၊ မိဘများအပေါ် လေးစားမှုရှိသော မူလတာဝန်လည်းရှိသည်။ ယုဒဘာသာတရားလမ်းစဉ်အတိုင်း ဆက်သွားမည့် 'မင်္ဂလာရှိသောမျိုးဆက်' ကို ထူထောင်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိသော သတ္တဝါကြီးတစ်ခုလုံး၏ သားသမီးဘဝသို့ ကျရောက်သောအခါ မိဘများ မည်မျှ စိတ်ပျက်အားငယ်စေသနည်း။
သူ့မိဘတွေက သူ့အတွက် ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီး သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ပညာပေးဖို့ ဒီလောကထဲကို ခေါ်ဆောင်လာဖို့ သူတို့အသက်တွေ ဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိတဲ့လူက သူလဲကျတဲ့နေရာကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။
မိဘများသည် ကလေးအား ပွေ့ဖက်ခွင့်ရရန် ခက်ခဲသော ကုသမှုများကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့နေရသကဲ့သို့ ဤကုသမှုတွင် မအောင်မြင်ပါက အခြားကုသမှုကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ၊ လက်မလျှော့လိုက်ပါနှင့် - ယခုတော့ ကလေးအပေါ် မူတည်ပါသည်။ သူ့မိဘတွေ အကျိုးရှိအောင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အတူတူပဲတဲ့။ ဤအရာသည် သူ့အပေါ်ထားရှိသော သူတို့၏ကျေးဇူးများအားလုံးကို ပြန်ဆပ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟု မသေချာသော ကုထုံးပညာရှင်များပင်လျှင် အောင်မြင်မှုများရှိသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ လိင်တူဆက်ဆံမှုသဘောထားသည် ခိုင်မာပြီး ကွဲပြားနေသော်လည်း ပြောင်းလဲရန် အလွန်ခက်ခဲသည် - ဒေါက်တာ Zvi Mozes (သူ၏ဆောင်းပါး၊ 'ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းသဘောထားများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိရောက်မှုရှိသလား'၊ 'Root' ဝဘ်ဆိုက်တွင်) မှ ဒေါက်တာ Zvi Mozes ကဆိုသည် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ခိုင်မာသော ယုံကြည်ချက်ရှိ၍ သင့်လျော်သော ကျွမ်းကျင်သော စောင့်ရှောက်မှုအကူအညီဖြင့် မိသားစုကို စတင်နိုင်သည်။
မွေးစားခြင်းနှင့် အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတွင် တားမြစ်ချက်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်သည့်အပြင် ကလေးယူသွားသော မိဘများအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုလည်း ပါဝင်သည်။ လိင်တူစုံတွဲများ မွေးစားရန် လိုအပ်ချက် တိုးလာခြင်းသည် ကလေးအား မိဘများလက်သို့ ထားရန် ကြိုးပမ်းမည့်အစား မွေးစားခြင်းကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် 'ထောက်ပံ့မှု' တိုးမြင့်လာစေရန် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ဆောင်မှု လမ်းကြောင်းကို မလွှဲမရှောင်သာ ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
'အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း' သည် မိသားစုများ၏ ဆိုးရွားသောဒုက္ခကို အမြတ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပို၍ပင်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးမျှ ကိုယ်ဝန်နှင့် ကလေးမီးဖွားခြင်းဝေဒနာကို သူစိမ်းများထံ ပေးဆောင်ရန် မဟုတ်ဘဲ ဆိုးရွားသော ငွေကြေး သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခရောက်နေမည့်အစား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားသော အစိုးရများ မပါဝင်ပါက မည်သူသိနိုင်မည်နည်း။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမယ့် ဆွေးနွေးချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ မေးစရာမှာ တားမြစ်ချက်များ၏ သဘောသဘာဝမှာ အဘယ်နည်း၊ နောက်ဆက်တွဲ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များ ရှိမရှိ၊
ထို့အပြင် အရာဝတ္ထုများ၏ ကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာ မှတ်စုအချို့လည်း ရှိသေးသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်သည် မိမိ၏ စိတ်ဆန္ဒများဖြင့် လူကို ဖန်ဆင်းပေးသူဖြစ်သည်။ အဲဒါကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လူသားတွေအပေါ် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုလို့ ကျွန်တော် မမြင်မိပါဘူး။
2. မိဘများ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် မရှိသည့် အခြေအနေများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘာလဲ? Azla သူမ၏ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်? အဲဒါအပြင် ကျွန်တော် မစစ်ဆေးရသေးပေမယ့် သင်္ချိုင်းဂူကို စောင့်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ "အခွင့်အလမ်းမရှိ" ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ပြင်းထန်လွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
3. လူသည် "ကျသည်" မဟုတ်ဘဲ "ဖမ်း" ခဲ့သည်။
4. ဤအငြင်းပွားမှုအားလုံးသည် ပြောင်းလဲရန်တာဝန် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ကိုပြောသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြဿနာကို မညွှန်ပြပါနှင့်။
5. လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏မိဘများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် သူ၏နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရာမှာ သားတစ်ယောက်ဟာ သူ့မိဘတွေကို နာခံစရာမလိုဘူးလို့ Rama Yod မှာကိုးကားထားတဲ့ Riki က သိထားပြီး၊ မိဘတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာလည်း ဒီအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
6. ကျရှုံးမှုများနှင့် ဆိုးရွားသောပျက်စီးမှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြသော ကုထုံးဆရာများစွာရှိပါသည်။ ကုသမှုက အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော်မမေးခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက အခြေအနေကို နှင်းဆီပန်းလွန်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထိုသို့သောအန္တရာယ်များကိုခံယူရန် လူတစ်ဦးအတွက် လိုအပ်ချက်သည် အလွန်ခိုင်မာသောအခြေခံပေါ်တွင်ရှိသင့်သည်။ တစ်ဖန် ဘာသာရေးအဆင့်တွင် ထိုသို့သော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိနေသည်မှာ သေချာသော်လည်း ၎င်းကို ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ တာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် မြင်ရန် ကျွန်ုပ် အလွန်သံသယဖြစ်မိပါသည်။ ထိုသို့သော ဆိုးရွားသော ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များထဲသို့ လူတစ်ဦးအား ကျေးဇူးတင်ရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ မိဘများသည် စိတ်ပြောင်းစေပြီး စိတ်အလိုမကျမှုမှ လွတ်မြောက်စေမည့် ပြောင်းလဲခြင်းကုထုံးများကို သွားကြမည်ဆိုပါက ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပိုမိုနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည် (သီလ၊ ဟာလခ) မဟုတ်ပါ။
7. နောက်ဆုံး မှတ်ချက်များသည် အလွန် တစ်ဖက်သတ် ဘက်လိုက်သော ဖော်ပြချက် ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည် အလွန်နူးညံ့သော ဘာသာစကားကို အသုံးပြုသည်)။ အကယ်၍ သင်သည် အမှန်တကယ် ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိခဲ့လျှင် ဤအခြေ အနေတွင် ၎င်းကို ဤကဲ့သို့ မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည်မျှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဖြစ်စေ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား တားဆီးသင့်သည်။ လုပ်ရပ်ကို နှောင့်နှေးမနေပါဘူး။ အလှူအတန်းပေးတာကလည်း လူတွေကို ပိုက်ဆံကုန်စေပြီး ခိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ Yigal Amir သည် လူသတ်မှုနှင့် အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဒါဘာကြောင့် ဘာသာရေးကို စွန့်လွှတ်သင့်တာလဲ။
စည်းကမ်းအရ၊ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ လူတိုင်းကို တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့ နောက်ဆုံးအချက်ကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ ငြင်းခုံတဲ့အခါ၊ ငါသံသယရှိပြီး ငါ့စီရင်ချက်ကို ပြန်ဆန်းစစ်မယ်။
သင်တင်ပြခဲ့သော အချက်များအားလုံးကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲ - ပြောင်းလဲခြင်းကုထုံးများတွင် ဆွေးနွေးထားသော အန္တရာယ်များအကြောင်း မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ပေးပါမည်။
ပထမဦးစွာ ကုသပေးသည့် ကုသမှုအားလုံးသည် မသင့်လျော်ကြောင်း နားလည်ထားသင့်ပြီး တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် သင့်လျော်ကာ အခြားတစ်ဦးအား ထိခိုက်စေနိုင်သော ကုသနည်းများ ရှိကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ပင် တစ်ဖက်ကို သေမင်းတံခါးသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည့် ကုသနည်းများ ရှိကြောင်း၊ ဆေးပညာတွင်ကဲ့သို့ပင် အခြားသော အထူးကု စိတ်ပညာရှင်က ကုသမှုကို ဂရုတစိုက်နှင့် ကုသမှု၏ သဘောသဘာဝကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိပေးသင့်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် သိပ္ပံပညာသည် အမှောင်ထဲတွင် အတော်လေး နစ်မြုပ်သွားသည်ကို သတိပြုသင့်သည် (စကားမစပ်၊ အမှောင်ထု၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းသည် ဆန္ဒအလျောက် ထွက်ပေါက်ရှာရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းကို သတိရှိရှိ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံကိုယ်တိုင်က လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို တရားဝင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အယူမှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။)
ကုသရန် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဟု ယူဆရသည့် အဓိကအန္တရာယ်များထဲမှတစ်ခုမှာ ကုသမှု ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်ခြင်းကြောင့် လုံးဝ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤအရာများသည် ဆန်းသစ်ပြီး စမ်းသပ်ကုသနည်းများဖြစ်ကြောင်း သင်ကြိုတင်သိထားသောအခါတွင် မျှော်လင့်ချက်အဆင့်သည် အလွန်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး ရှုံးနိမ့်မှု၏ စိတ်ပျက်ခြင်းသည် လူကို ပြိုပျက်သွားစေမည်မဟုတ်ပေ။ ဒီနည်းနဲ့ 'မပြီးဘူး' ဆိုတာကို နားလည်ပြီး 'မနက်ဖြန်မှ မဟုတ်ရင် မနက်ဖြန် သဘက်ခါ' 🙂
တစ်ဖက်တွင်၊ Torah နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဤသဘောထားကို ကုစားရန် ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်သည့်အစမှ စတင်ရပါမည်။ တစ်ဖက်တွင်မူ ရှေ့သွားရမည့်လမ်းသည် ရှည်လျားကြောင်း သိလျက်နှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေရှာမတွေ့သေးပေ။
ဤသည်မှာ ကုသနည်းကို ရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းသောအခါတွင် လူသားမျိုးနွယ်၏ ပြဿနာအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ တခါတရံ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကုန်လွန်သွားတတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရာနှင့်ချီ၍ပင် ကုန်ဆုံးသွားသော်လည်း အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရုတ်တရက် မရောက်မချင်း စိတ်မပျက်ဘဲ အကြာကြီး မနေဘဲ ဖြစ်နိုင်သည့် ဦးတည်ရာတိုင်းကို ဆက်လက်ရှာဖွေပါ။
ပထမအချက်မှာ ဤအရာများသည် ကျွမ်းကျင်သူ စိတ်ပညာရှင်များထံမှ အစီရင်ခံစာများဖြစ်သည်။
ဒုတိယအနေနဲ့ မင်းပြောသလို ကုသမှုမပေါ်သေးသရွေ့ မင်းပြောသလို မြူခိုးထဲရောက်နေရင် အဲဒီလူဆီက မင်းဘာကိုမျှော်လင့်လဲ။ ထိရောက်တဲ့ ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ လိင်တူမဆက်ဆံဖို့လား။
ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော စာပေများကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးအား သူ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းများကို ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပြီး ပညာရှင်များက မတွေးထားမိသော လမ်းညွှန်ချက်များကိုပင် သူ့ဘာသာသူ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခ အခက်အခဲကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
Gemara တွင် သို့မဟုတ် 'Edges' တွင် မရေရာသော ပြဿနာကို ဖော်ထုတ်ရန် လူများက နှစ်သက်သကဲ့သို့၊ ဤတွင် ကောင်လေးသည် သူ့ဘဝ၏ ပဟေဠိကို ဖြိုခွဲရန် စွဲမက်ဖွယ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ရခဲ့သည်။ သူ့အချစ်နဲ့ ကိလေသာတွေကို ဘယ်အရာက နှိုးဆွပေးပြီး ဘယ်အရာက သူတို့ကို ငြိမ်သက်စေသလဲလို့ သင့်ကိုယ်သင် မေးပါ။ မိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အရည်အသွေးများကား အဘယ်နည်း။ ထို့အပြင် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နှိုးဆွပေးနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် 'ကျားမ မရွေး' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု၌ တုံ့ဆိုင်းသွားစေသည့် အရည်အချင်းများရှိသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
တတိယ။ 'ဖြောင့်' ခြင်းသို့ ရောက်သော ကရုဏာစိတ်ကိုလည်း ပွါးစေ၏၊
၀တ်စုံမ၀တ်တဲ့ အမျိုးသမီး တွေ အဆက်မပြတ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကြုံလာရသူတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ ဖြတ်သွားသူတွေရဲ့ ဗီဇကို လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဃ။ အောင်မြင်မှုတိုင်းအတွက် အသေးအမွှားနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်လျှင် မိမိကိုယ်မိမိ မည်သို့ 'အရှက်ကွဲရပုံ' ကို သိရန်။
ဖန်ဆင်းရှင်သည် အောင်မြင်မှုတိုင်းနှင့် ဗီဇ၏ ငြင်းပယ်မှုတိုင်းတို့မှ မည်မျှ နှစ်သက်သည်ကို တွေးတောပါ။ ဗီဇ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကို နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် နှစ်သက်လိမ့်မည်၊ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ ထိုထက်ပို၍ကြာပါသည်။ မကောင်းသော ဗီဇသည် ရံဖန်ရံခါ ပေါ်လာသကဲ့သို့၊ အနည်းငယ် အစပြု၍ များစွာ ဆက်လုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကောင်းသော ဗီဇသည် 'အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ' - ယနေ့ အထိ ဆက်လက် တည်ရှိနေပါသည်။
ဘုရားသခ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လိုက်စားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့။
စာကျက်၊ အလုပ်၊ ဂီတ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင် ဖာရောမင်းသည် ငါတို့အား 'အလုပ်သည် လူတို့ကို ရိုသေ၍ မုသာစကားဖြင့် မကယ်တင်ပါနှင့်' ဟု ငါတို့အား သွန်သင်သည်မဟုတ်လော။
နှင့် 'ပြဿနာ' ထဲမှာ အမြဲနစ်မြုပ်မနေပါနဲ့။
'ပြဿနာ' က 'အထောက်အထား' ဖြစ်လာတယ်။ လူတိုင်းမှာ ကိလေသာတွေ ပြုတ်ကျတာ ကိုယ်စီရှိကြတာကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် 'ကောင်းမှုကုသိုလ် ပွားများခြင်း' အထွတ်အထိပ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ များပါတယ်။ အဲဂုတ္တုပြည်သည် ကျရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်သကဲ့သို့၊ ဘဝ၏အောင်မြင်မှုများနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်း ခက်ခဲမှုတို့ကြောင့် အတိအကျ ခံစားရသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကြောင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝမ်းမြောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာအတွက် အလွန် အဖိုးတန်လှပါသည်။
P 'ဘုရားသခင်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် သင်၏ခွန်အားဖြစ်၏'
ဤလောက၌ ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို ခံစားရလေလေ၊ ကိုယ်တော်၌ ဝမ်းမြောက်လေလေဖြစ်သည်။ 'လက်ျာဘက်၌ ငါလဲ၍မဖြစ်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားကို ငါ့ရှေ့မှာ အစဉ်မပြတ်တောင်းပန်ပါ၏' ဟု နောက်လိုက်များက တောင်းဆိုသည်– 'ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကြောင့် သင်တို့သည် ထွက်လာကြလိမ့်မည်' ဟူ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြကုန်၏။ ဘဝ၏လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ မျှဝေရန်၊ ကောင်းမှုအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ပျောက်ဆုံးနေသူကို တောင်းဆိုရာတွင်၊ လူကိုယ်တိုင်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးမှုဖြင့် ဘဝကို သင်ချဉ်းကပ်သောအခါတွင် အတားအဆီးအားလုံးကို သင်ပစ်ချပါ။
ဤအရာများသည် သူရဲကောင်းဆန်စွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း၏ အခြေခံအချက်အချို့ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံဉာဏ်များကို 'ပညာရှိတို့အား ပေး၍ ပညာရှိပါ' ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ မင်းရဲ့စကားတစ်ခွန်းကို ငါသဘောမတူဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါသူတို့ကို တုံ့ပြန်စပြုလာတာနဲ့ (ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ဟာလခဟာ ထပ်ခါတလဲလဲ ရောနှောနေတဲ့ အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ လုံးဝကွဲလွဲနေတဲ့ ခံယူချက်၊ စသည်ဖြင့်)၊ ဒါက သဘောထားကွဲလွဲမှု မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သဘောပေါက်လာတယ်။ အရာတွေက ဒေါသတွေချည်းပဲ။ ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက Rabbi Shalom Shevdron ထံမှ ကြားသိခဲ့ရသော အောက်ပါပုံပြင်သည် အလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ တစ်ခါက လမ်းပေါ်မှာ လဲကျပြီး ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ ကောင်လေးကို တွေ့တော့ လှမ်းခေါ်ပြီး ဆေးရုံကို ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံး ပြတင်းပေါက်မှ လူများနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာများက “Rabbi Shalom၊ ဆေးဝါး အပြည့်အစုံ” (Yiddish ၊ ဟုတ်ပါတယ်) လို့ အော်ဟစ် နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ ပြေးလိုက် ပြေးလိုက်နဲ့ လူတိုင်း ဆန္ဒရှိကြ တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သူ့ရှေ့မှာ အဝေးက အမျိုးသမီးတစ်ဦး လျှောက်လာနေတာကို မြင်ပြီး တခြားသူတွေလိုပဲ " အရှင်ဘုရား ချမ်းသာပါစေ၊ သူ့အနားကို ဖြည်းညှင်းစွာ ချဉ်းကပ်လာပြီး သူ့အသံက အနည်းငယ် ပျော့သွားသည်။ အဆုံးတွင် သူမသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို (= သူမ၏သား ဟုတ်ပါတယ်၊) သူမသည် ထိတ်လန့်စွာ အော်ဟစ်နေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူမ၏ဆန္ဒနှင့် အကြံဥာဏ်များ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ အခမဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်- မွေးရာပါ ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် လူတစ်ဦးသည် တစ်သက်လုံး ခံစားခဲ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်ဖူးသည်။ သူ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်မှာ လေးလေးနက်နက် လျှောက်လှမ်းရင်း သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လူတိုင်းက သူ့ကို “မင်းအခက်အခဲကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်” ​​သို့မဟုတ် “မင်းရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ထိုးထွင်းသိမြင်နားလည်မှုရယူပါ။ အခြားသူများကလည်း သူ့ကို အခမဲ့ အကြံဉာဏ်ပေးသည်– “အခက်အခဲကနေ တည်ဆောက်ရလိမ့်မယ်။ “ရွာများမှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း” ဟုဆိုသည်။ "အောင်မြင်မှုတိုင်းအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးမွမ်းနည်းကို သိပါ အခြားသူများက သူ့ကို အကြောင်းကြားရန် ဝေးသွားသည်- "ကျွန်ုပ်တို့ မဆင်းရဲ၍ ဟင်းချိုဒဏ်ကို မခံစားခဲ့ရသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားမိသည်" သို့မဟုတ် "ပြဿနာတစ်ခုထဲသို့ အဆက်မပြတ် နစ်မြုပ်နေမည့်အစား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော လိုက်စားမှုများတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပါ။" “ဘုရားသခင်၏ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ခိုင်ခံ့သည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် Mehadrin မှ mehadrin က “မှန်ပါတယ်၊ ဘယ်သူမှ တကယ်အောင်မြင်တာ မရှိသလောက်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ပင်လယ်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ လစာနဲ့ လူနာတွေအတွက် ရွှေရာချီယူတဲ့သူတွေ ရှိတယ် (တကယ်လို့ ရိုသေလေးစားမှုရှိရင်၊ စစ်မှန်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီ သွားမယ်ဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ်) အောင်မြင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည် အရှင်ဘုရား Shalom ကို ကူညီတော်မူပါ။” ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ မသိဘူး။ ငါဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ပြီးသွားတော့ လူတိုင်းက သူ့အတွေ့အကြုံကနေ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံကနေ ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်- နောက်ဆုံးတစ်ခု လိုအပ်တာက ဒီလိုမျိုး အကြံပြုချက်တွေနဲ့ လိုမျိုးပါပဲ။ အမှန်တရားကို ဝန်ခံပြီး အကြံဉာဏ်မရှိဘူးလို့ ပြောတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့ခမည်းတော်က ငါ့အပေါ် အမိန့်ပေးတယ် (ဘာသာရေးနဲ့ အကျင့်ပျက်တဲ့ အမိန့်)။
ပြဿနာနှင့်ဝေးကွာသောကြောင့် Rabbi Levinger ၏စကားများကို ဖြေလျှော့သောလေသံဖြင့် ပြောသည်မှာ ဖြစ်နိုင်သည်။ သူနဲ့ တခြားသူတွေက အဲဒီသားရဲ့အမေလို ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ အဖြေမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အခြေအနေ၏ သနားမှုနှင့် ပြဿနာများ အားလုံးပြီးနောက်၊ သူ၏ စကားများသည် ဘာသာရေး လိင်တူဆက်ဆံသူ၏ မျှော်လင့်ထားသည့် အရာကို အလွန်ဆိုးရွားစွာ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍ - သူ၏စကားများသည် ဂျူးတိုင်းပြုလိုသည့်အရာ မဆိုးကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်။ မည်သူ့ကိုမဆို ကရုဏာထားရန် ဖြစ်နိုင်သည် (ကရုဏာသည် လူသိများသော ဆွေမျိုးကိစ္စဖြစ်သည်)၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် ပြဿနာများနှင့် ပြဿနာများ ရှိကြပြီး၊ ဤသည်မှာ ဂျူးလူမျိုးများကို မည်သို့ဆက်ဆံသင့်သနည်း။
ပထမအချက်၊ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ပြဿနာနှင့် ဝေးကွာနေသည့်အချက်ကို ချဉ်းကပ်ရန် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ ဖယ်ကြဉ်ခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် စကားမပြောသင့်ပါ။
အဖြေတွေအကြောင်းပြောရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ လေသံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဖြေတွေကတောင် မမှန်ပါဘူး။ ပထမအချက်၊ ဤနေရာတွင် စာရိတ္တပြဿနာမရှိပါ၊ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုံး စတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ ဤအကြံပြုချက်အများစုသည် အထောက်အကူမဖြစ်ပါ။ အချို့သော ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်မှန်ကို ရွေးချယ်၍ ဘက်လိုက်သောနည်းဖြင့်၊ အခြားအပိုင်းက ပျင်းရိသက်သာခြင်းနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးတယ်။ ခံစားနေရသောလူသည် Kari ကိုကျော်ဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သူအောင်မြင်လိမ့်မည်၊ သို့သော် Kari ကျော်လွှားမည့်ဘက်မှ အကြံဉာဏ်မပေးနိုင်သည့်အပြင် ဘုရားသခင်၏ပျော်ရွှင်မှုသည် သူ၏အမာခံဖြစ်ကြောင်းကို သင်မပေးနိုင်ပါ။ ထို့နောက် သူ့မိဘများနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို စိတ်ပျက်စေသောကြောင့် သူသည် အကျင့်ယိုယွင်းသူဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောသည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီသည် သူ၏အခြေအနေတွင် အောင်မြင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ သူသည် ထိန်းကျောင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒါကို ကိုးကားဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ အလွန်ခက်ခဲပြီး မဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့် ကြောက်စရာမဟုတ်ဟု သူ့ကိုပြောပြပါ။ ၎င်းသည် အချည်းနှီးသော ကျမ်းပိုဒ်များကို ကိုးကား၍ မရေမတွက်နိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများကို ခြစ်စက်များဖြင့် ရွေးချယ်ကာ သူ့ကို မကူညီဘဲ (၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စိတ်ရောဂါအားလုံးနှင့် မတူဘဲ၊ ယုံကြည်၍ ဆုံးဖြတ်ပါက၊
အကယ်၍ သင်သည် ထိုကဲ့သို့သောလူ၏ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်သည် သူ့ကို ပိုမိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး သူ့ကိုအားပေးကူညီရန် တွန်းအားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ယေဘူယျကျောင်းက အကြံပြုချက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ချက်များသည် မကြာမီ ဤနေရာတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုနေရာတွင် အနည်းငယ် ပိုမိုရှင်းလင်းသွားပါမည်။
Elul ၏ XNUMXth တွင် XNUMX
ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် Rabbi Michael Avraham Neru က သူ၏ အခြေအနေမှ လွတ်မြောက်ရန် "လူက ဘာလုပ်သင့်သလဲ" ဟု မေးခဲ့သည်။ ဖြောင့်မတ်သောဆန္ဒကို ဆောင်ရန် ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ငါသိသည်နှင့် ငါ့အတွေ့အကြုံအရ သူ့မေးခွန်းကို ငါဖြေခဲ့သည်။
အခြားသူများကဲ့သို့ 'စွန့်စားခန်းများစွာကို မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ' ဂျူးတစ်ဦးအနေဖြင့် အကျပ်အတည်းများနှင့် လှိုင်းအတက်အကျများ၊ အတက်အကျများ စသည်ဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည် - ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကူညီဖြေရှင်းပေးရမည့် နည်းလမ်းများကို အကျဉ်းချုံး၍ တွေးခေါ်နိုင်သည်၊ မိမိပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အခြားသူများကို ကူညီပေးနိုင်သည်။
မင်းရဲ့စကားနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကို ငါတကယ်မေ့သွားပြီ၊ ဒါက ပထမဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဇ စိတ်ဖိစီးမှုအရှိဆုံးအခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ဘာတွေ ပေးမလဲ ၊ မင်း ဒေါသကို ပြေပျောက်စေမယ့် အရာ ? စိုးရိမ်စိတ်များ၊ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် 'စိတ်ဖိစီးမှု' တို့မှ ရုန်းထွက်သောအခါတွင် သင်သည် သာ၍ပါဝင်ပြီး ရွှံ့ထဲသို့ နစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အခြေအနေကို အေးအေးဆေးဆေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဘာသာရပ်ကို စာအုပ်များမှလည်းကောင်း၊ ပညာရှင်များထံမှလည်းကောင်း သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးမကြီးပါဘူး၊ သင့်ကိုယ်သင် သင်ယူပါ- သင်ဘာကိုနှိမ့်ချပြီး သင့်ကိုဘာတွေတက်စေလဲသိရန်။ ဘာတွေက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သလဲ ၊ သက်သာရာရမှုဆိုတာဘာလဲ။
အမှန်တော့၊ ဒါက စိတ်ပညာရှင်နဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ လုပ်တဲ့အရာပဲ၊ မင်းနဲ့အတူ ထိုင်ပြီး 'စိတ်ဂဏန်းသင်္ချာ' ကို လုပ်ပါ၊ အဲဒီကနေ ပြဿနာရဲ့ အရင်းမြစ်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်လာပြီး ဖြေရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို သိလာရတယ်။
သူ့သားရဲ့ အခြေအနေကို အလေးအနက် ခံယူထားတဲ့ 'ကလေးအမေ' နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မင်းရဲ့ မှတ်ချက်က မရှင်းလင်းပါဘူး။ သားဖြစ်သူရဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ဒုက္ခ၊ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ငိုကြွေးနေရင်တောင် တည်ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခကို ကျွန်တော်လည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ချည်နှောင်ရန် ဘုရားရှင်၏ ပညတ်တော်အတိုင်း ကျင့်သော ယစ်ဇတ်ပင်လျှင် 'အနှစ်ကိုးဆယ် မွေးဖွားသော သားသည် မီးနှင့် စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ရသော မိခင်၏ ဝမ်းနည်းခြင်း' ကြောင့် စိတ်နှလုံး နာကျင် ကိုက်ခဲ၏၊ ငိုလည်းငို။ ခက်ခဲသောစမ်းသပ်မှုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများ၏ပုံတူပုံသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရပ်တည်ပေးမည့် ယောသပ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းချီးပေးပါစေ။
ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်ကြည့်သော်လည်း ဤနေရာတွင် သူဖြည့်ဆည်းလိုသော ဖြောင့်မတ်သောလူကို မတွေ့ရတော့သော်လည်း၊ စကားရည်လုပွဲမုန်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်ရေးခဲ့သော အရာများ၏ ပြတ်သားမှုအတွက် တောင်းပန်ရမည်။ Mr. သည် ထုံးစံအတိုင်း ကောက်ချက်ချကာ ယဉ်ကျေးစွာ မှတ်ချက်ချပြီး ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ဒုစရိုက်မှုများတွင် မုန်တိုင်းထန်သော လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
နောက်ကွယ်မှာ ငါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သဘောမတူတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းပြောခဲ့တဲ့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုမှုတွေက နောက်ကွယ်က ထွက်လာတဲ့ ခါးသီးတဲ့ တခြားစကားလုံးတွေကိုတောင် အထင်ကြီးပြီး တံဆိပ်ခတ်ထားခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ရာမှာ တစ်ဖက်သတ်သဘောပေါက်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ သူမက ကျွန်မနဲ့ နည်းနည်း စိမ်းနေပုံရတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် မင်းရဲ့မှတ်ချက်မှာ အကူအညီရှာဖို့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆွေးနွေးမှုတစ်လျှောက်မှာ မှတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အတိုင်း အဲဒါတွေကို နည်းနည်းကွဲပြားတဲ့အခြေအနေမှာ ထည့်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အားလုံးပဲ အကောင်းဆုံးနဲ့ ထပ်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။
ဝေဒနာရှင်အား ပြောပါ :: မင်း ပျောက်သွားပြီ။ မင်းမှာ အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ဆေးခန်းသွားပြဖို့က လုံးဝအရေးမကြီးပါဘူး။ သင်္ချိုင်းကုန်းကို တည့်တည့်သွားပါ။
ထို့နောက် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းအကြောင်း တိုင်ကြားပါ။ ပြီးတော့ မင်းရဲ့လူကောင်းတွေက ဝေဒနာရှင်တွေကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ သတ်သေဖို့ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မလား?
နောက်တစ်နည်းလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့အား လက်တွေ့ကျသော အကြံဉာဏ်များ ပေးနိုင်သည် (ကံမကောင်းသော်လည်း အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ၎င်းကို ရိုးသားစွာ ရှင်းလင်းပြီး အဖြူရောင်ဆေးကြောခြင်းမဟုတ်ပါ) သို့သော် အကြံဉာဏ်မပါဘဲ ဤအကြံပြုချက်များကို မပေးဘဲ၊ သင်ပေးဆောင်ခဲ့သော ပြဿနာရှိသော နှစ်သိမ့်မှုမရှိဘဲ စိတ်အလိုမကျမှုကိုသာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်စေသည် (နေစဉ် ဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ ခိုင်ခံ့သော ဘုရားသခင်။)
ပြီးတော့ သူတို့ကို နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ ယုံကြည်လို့မရတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ခြယ်မှုန်းတာဟာ မမှန်ပါဘူး (ဒီကျရှုံးသူတွေဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုထုံးဆရာတွေဖြစ်ပြီး ယုံကြည်သူ အောင်မြင်နေသလိုပဲ)။
သူတို့၏မိဘများသည် ၎င်းတို့ကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီး ၎င်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်က ၎င်းတို့ကိုမျှော်လင့်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် ကျရှုံးကာ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌ ကြီးပြင်းလာသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အကျင့်ပျက်သူများဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကိုရှင်းပြရန်ပင် နည်းပါးပါသည်။ သင်လေးလေးနက်နက်ပြောတာလား? ဆင်းရဲဒုက္ခကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေသနည်း၊
သင်တင်ပြခဲ့သော သီလနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း၊ ငါ့မိဘတွေက ငါ့ကို ကီလိုဂရမ်တစ်ရာသယ်ချင်ရင် ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျေးဇူးသိစိတ်နဲ့ လုပ်ရမှာလား။ ထိုသို့သော ကျင့်ဝတ်တရားများ ရှိပါသလား။ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်း Maharik အကြောင်း မင်းကို ငါ သတိပေးထားပြီးသား။ ကျွန်တော်ပြောနေတာက အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ ဟာလခ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေတာ။ အဲဒီလို ဟာလခ ကောက်ခံမှုမျိုး ရှိရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရား ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာလား။ ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ပါပဲ။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် အကျင့်စာရိတ္တနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ဆောင်းပါးများကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ-
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר ဒါတွေအားလုံးအတွက်၊ သူတို့ကျရှုံးရင်တောင် တခြားလူတိုင်းနီးပါးက အဲဒါကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သူမအတွက် Hananiah Mishael နှင့် Azariah တို့အတွက်မဟုတ်ပါက Ketubot Lag တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်၊ အဆက်မပြတ်အပျော့စားဝေဒနာနှင့် ကြီးမားသော်လည်း ဒေသတွင်းနှင့် ခဏတာဝေဒနာများကြား ခြားနားချက်ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် ချိတ်ထားသည့် အပိုင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ထားပြီးဖြစ်သည်။
အောင်မြင်နိုင်ခြေများဆိုင်ရာ စကားလုံးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္ဍရှိ ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Shiloh Institute မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ Zvi Mozes ၏စကားများဖြစ်သည်။ ပြတ်ပြတ်သားသား စိတ်သဘောထား ပြောင်းလဲမှုသည် အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း အလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူများသည် မှန်ကန်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက အတိအလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျန်တဲ့ မှတ်ချက်တွေက ရှင်းပါတယ်။ အရှင်ဘုရားကို သတိရဖို့ လူကို လက်ထပ်ခွင့်ပြုဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ 🙂 ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ရာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မိဘနောက်လိုက်ဖို့ ဘယ်သူက ခွင့်ပြုတာလဲ။ နန်းတော်သို့ မပြေးပါက အနက်ရောင်ဝတ်ကာ အနက်ရောင်ဖြင့် ခြုံထားရလိမ့်မည်” လို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးရင်း သူ့မိဘတွေရဲ့ ဘဝတွေကို မပျက်စီးစေပါဘူး။
မည်သူမျှ မိမိဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရပေ။ လူမှုရေးဝန်ထမ်းကို မေးကြည့်တော့ သူက ပြောပြလိမ့်မယ်။
ကာမာဝစရဓာတ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် အကြင်သူ၏ ခံစားမှုမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်၏။ လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ကံကြမ္မာကို တာဝန်ယူပြီးသည်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေပြီဖြစ်သည်။ ဒေါသဖြစ်လျှင်- ဒေါသလည်းဖြစ်၊ ဒေါသ၏ ဘာသာစကား၊
"ကျွန်ုပ်တို့၏ကဏ္ဍ" နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယနေ့ခေတ်တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောဆန္ဒတစ်ခုနီးပါးဖြစ်နေသော လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရာထူးများကို သင်လျစ်လျူရှုနေသည် (ကျွန်ုပ်သည် ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ ဤသဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယအချို့ရှိပါသည်၊ သို့သော် သင်ကလောင်တံတစ်ဖျပ်ဖျပ်ခတ်ရုံဖြင့် ၎င်းကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ ဒေါက်တာဆိုတော့ ဒီလိုပြောတယ်)။ ထို့အပြင်၊ အနည်းဆုံး သင်ကိုးကားထားသည့်အတိုင်း သူ၏ကိုယ်ပိုင်စကားများပင် အလွန်ဝန်လေးနေပါသည်။ မင်းအရမ်းယုံကြည်ပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး မင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပြည့်စုံရင် မင်းကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့ ငါပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီမှာအရည်အတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ? အခြားမည်မျှရှိသနည်း။ သူတို့ထဲက ဘယ်နှစ်ယောက် အောင်မြင်လဲ။ သူ နံပါတ်တွေ ပေးခဲ့တာလား။ သိပ္ပံသည် ကိန်းဂဏန်း ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အလုပ်လုပ်သည် ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ (သူသည် အလုံးစုံကို ကောက်ချက်ချနိုင်သည်၊ သို့သော် သင်ပြောသည့်စကားမှ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းကို မမြင်ပါ)။
ကျန်တဲ့ မင်းရဲ့ မှတ်ချက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရင်ခေတ်တွေလိုပဲ ရှင်းပါတယ်။ ဤနေရာ၌ မည်သူက မဟာရိက္ခာကို မှတ်သားခွင့်ပြုရန် ရည်မှန်းထားသနည်း။ ငါတို့က တရားသူကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေတာလား။ နားမလည်ရင် ငါရှင်းပြမယ်။ မင်းရဲ့နည်းလမ်းက ငါ့ကိုမွေးပြီး ငါ့အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားလို့ မိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို လိုက်လျောဖို့ ကျင့်ဝတ်တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အမည်မဖော်လိုသူမဟုတ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ တောင်းဆိုရင်- မင်းရဲ့အမြင်အရ ငါက သူတို့ကို နာခံသင့်တယ် မဟုတ်လား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ၊ မဟုတ်ဘူး (ဒါကြောင့်လည်း ရာမမှာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်)။ အကျင့်စာရိတ္တက ဘယ်မှာလဲ။ အဓိပ္ပါယ်- အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် မိဘစကားကို နာခံရန် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တာဝန်မရှိပါ။ ငါ့ဘဝနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ။ ဒါဆို မှတ်မိလား မမှတ်မိဘူးလား။ ၎င်းတို့ကြားက ခြားနားချက်မှာ halakhic ဖြစ်သည်၊ သို့သော် မိဘများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တာဝန်တစ်ခုအကြောင်း သင်ပြောခဲ့ပြီး ဤကိစ္စတွင် ကွာခြားမှု မရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ အမျိုးသားအစား အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကြီးစွာသောဒုက္ခနှင့် သားအတွက် မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးနှင့် အခြားတစ်ဦးကို အစားထိုးခြင်းသည် တုနှိုင်းမယှဉ်နိုင်သော လွယ်ကူသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒါဆို သူဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရမှာလဲ။ သင်၏ဘာသာစကားအားဖြင့်၊ ယောက်ျားသည် မိမိမိဘတို့ကို ချည်နှောင်၍ ကိလေသာ၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်၌ ကြောက်မက်ဖွယ်သောဝေဒနာကို ဖြစ်စေသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ အကြင်သူသည် မိမိကိလေသာကို နှိပ်စက်၍ အခြားအိမ်ထောင်ဖက်ကို ယူဆောင်၍ ချစ်လှစွာသော မိဘနှစ်ပါးကို အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ရောင့်ရဲစေမည့်သူ။ ယေဘူယျအားဖြင့် သူ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ခက်ခဲမှုမရှိပါက- သူ့ကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ယုံကြည်စေကာ ဒေါက်တာမောရှေထံသွားကာ သူ့ကို ကျော်လွှားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ပြသနာကဘာလဲ?
မင်းရဲ့စကားအဆုံးမှာ ကင်ဆာရောဂါရှိသူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်နိုင်မှ ကယ်တင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာလိမ့်မယ်။ တခြား နာတာရှည် လူနာတိုင်းလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ယင်းတို့သည် သံသယကင်းကင်းနှင့် သံသယကင်းသော ခေတ်သစ်မိုက်မဲမှု ဆောင်ပုဒ်များဖြစ်သည်။ သူတို့က Rash Shevdron ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ခေါ်သွားကြတယ်။ တခြားသူတွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောတဲ့အခါ လွယ်ပါတယ်။ လူမှုရေးဝန်ထမ်းကို မေးကြည့်တော့ သူက ဒါကို ပြောပြလိမ့်မယ်။
ကင်ဆာရှိသူကို သေချာပေါက် ကယ်တင်မယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ကုသ၍မရနိုင်သော ပြင်းထန်သောရောဂါရှိသူသည် ကုသဆေးရှာနေသည်ဟု ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်ဟေဇကိမင်းကြီးက၊ သင်သည် သေ၍အသက်မရှင်ရဟုမိန့်တော်မူ၏။ သင်ရှာဖွေ၍ ရှာဖွေခဲ့သည်၊ သင်သည် မေတ္တာဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံ၏ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရသည်၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မဟုတ်ဘဲ ကုသရန် ဆရာဝန်အား ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် 15 နှစ်ကျော်က ကြွက်သားများ ချို့ယွင်းသောရောဂါ ခံစားခဲ့ရသော R. Cohen-Melamed သည် ချစ်လှစွာသော ဂျူးလူမျိုးတစ်ဦး ရှိပြီး ၎င်းတွင် အသက်ရှင်ရန် လအနည်းငယ်သာ ကျန်တော့ကြောင်း ဆရာဝန်တစ်ဦးမှ အသိပေးခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ မယ်လမ်သည် သူ့စကားကို နားမထောင်ခဲ့ပေ။ ယနေ့တိုင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာ စာအုပ်များရေးသားနေပါသည်။
ဒဿနိကဗေဒနဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ ကျွန်တော် လာခဲ့တာ ဟုတ်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ - ငါ့မျက်စိရှေ့မှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံတစ်ပုံတည်းပဲ၊ စိတ်ရှုပ်ရှက်ရွံ့နေတဲ့ လူငယ်လေးဟာ သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြားမှာ စုတ်ပြဲသွားတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၎င်း၏ဖန်တီးသူနှင့် ဖန်တီးသူနှစ်ဦးလုံး အပြင်ထွက်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ သူ့အကွဲအပြဲကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော အခွင့်အလမ်းက အဖြေရှာဖို့ဖြစ်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြေအရှိဆုံး လိပ်စာကို ရှာဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်' ကို ငါနည်းနည်းကြောက်တယ်- သူတို့က အကောင်းမြင်လွန်းတယ်၊ မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အထူးသဖြင့် ချက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ပျက်အားငယ်သွားနိုင်တယ်။ ထို့ အပြင်၊ အချို့သော ကုထုံးဆရာများသည် ကျွမ်းကျင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ကြပါ။ ပြီးတော့ 'ယောက်ျားပီသမှုကို အားကောင်းစေတယ်' ဖို့ကြိုးစားတဲ့ သူတို့ရဲ့ 'ထပ်ခါတလဲလဲနည်းလမ်း' အတွက် - အချို့ကိစ္စတွေအတွက်သာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါက ကိစ္စတိုင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်လို့ မထင်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မသိသော ဒေါက်တာ Zvi Mozes ၏ ဦးတည်ချက်သို့ လှည့်လာသော်လည်း အကောင်းမြင်သော်လည်း သတိကြီးစွာထားတတ်သော ပုံစံသည် ကျွန်ုပ်တွင် သတိကြီးစွာ အကောင်းမြင်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ မင်းနဲ့အတူ ငါက သူ့ကို အတိုချုံးကိုးကားပြီးပြီ။ Yoav Sorek ၏ ဆောင်းပါးနှစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ချက်များတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အလမ်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသော သူ၏မှတ်ချက်ရှိ အဓိကစာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကို ကူးယူရန် အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရသည် ( 'Link' သည် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မသိသောကြောင့် တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် ကျွန်ုပ် 'Linkopov' သည် ကုသ၍မရပါ :) .
နယ်ပယ်ရှိ ဝါရင့်ကုထုံးပညာရှင်တစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံသည် ခြေလျင်မတက်ဘဲ ... ၎င်း၏ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မဆုံးဖြတ်ရသေးသူများကို အသိပေးရန်နှင့် ၎င်းထံမှ အကူအညီရယူရန် ကြိုးပမ်းရမည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
သားသည် မိဘကို မကြွေးဘူးဟု မဟာရိက္ခာကျမ်း၌ သင်၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပေ။ သားဖြစ်သူ၏ မစ်ဇ်ဝသ်ကြောင့် မိန်းမနှင့်လက်ထပ်ရန် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသော ဖခင်တစ်ဦး၏ဂုဏ်အသရေကို လူအချို့က နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး၊ သူသည် ကောရှ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တွေ့ရှိပြီး Man Mifis ကို ချစ်မြတ်နိုးပါက သူမကို ရှာတွေ့နိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ တားမြစ်ထားသောအိမ်ထောင်ရေးမှ ခွဲထွက်လိုသော ယောက်ျားကို Kono က ခွဲထွက်ချင်အောင် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ကောင်းသောအိမ်ထောင်ရေးမှ ခွဲထွက်ကာ ကောင်းကင်နှင့် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင် တားမြစ်ထားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လူငယ်အား မိဘများ၏ဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ဘဲ မိမိစိတ်နှလုံး၏ရွေးချယ်မှုဖြင့် လက်ထပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ရိုသေလေးစားမှုအပြည့်ဖြင့် ၎င်းတို့အား ကောင်းသောစကားနှင့် နှစ်သိမ့်ပြောဆိုရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 'ချစ်လှစွာသောမိဘတို့၊ ကျွန်ုပ်အတွက် သင်ပြုလေသမျှတို့ကို မြတ်နိုး၍ မြတ်နိုးပါ၊ ဤဖြောင့်မတ်သော မိန်းကလေးနှင့် ခွန်အားကြီးသော မိန်းမထံမှ သန့်ရှင်းသော ဝတ်ပြုခြင်းခံရမည်မှာ သေချာပါသည်' ဟု သူတို့ကို ပြောပါ။ ချက်ခြင်း မသင့်မြတ်လျှင်ပင် - မြေးမွေးသောအခါတွင် ရင်ကြားစေ့လိမ့်မည်။
'စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်' ဟုခေါ်သော ဖန်တီးထားသည့် Cretan တားမြစ်ချက်မှ သူတို့သည် အဘယ်ပျော်ရွှင်မှုရကြမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်များ ပြတ်သားမှုအတွက် ဆိုက်ပေါ်တွင် တောင်းပန်ခဲ့ပြီး ဤနေရာတွင်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ (၎င်းကို ချန်နယ်နှစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်းကို ကျွန်ုပ် နားမလည်ခဲ့ပါ။ အလွန်လျှို့ဝှက်ရန် လိုအပ်သော အရာများကို ဤနေရာတွင် မတွေ့ရတော့ပါ။ အချို့သောအရာများကို ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုကို ဤနေရာတွင် အီးမေးလ်သို့ လွဲမှားစွာ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။)
အမှန်တော့၊ ကျွန်ုပ်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရာသည် အဓိကအားဖြင့် အကြောင်းအရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် အကြောင်းအရာကိုလည်း ကျွန်ုပ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပါသည်။ ပြီးတော့ မင်းမျိုးစိတ်တွေရဲ့ မျိုးစိတ်တွေကို ထိပါးလာလိမ့်မယ်။
Maharik နှင့် အခြားသူများ၏ နယ်မြေကို လေးစားခြင်း သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးများတွင် ကျွန်ုပ်၏ မှတ်ချက်ကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל မိဘအပေါ် ရိုသေလေးစားသင့်သည့် အပြောအဆိုပုံစံမှာ ထင်ရှားသည်။
S.D. XNUMX တွင် Elul, p
သီးသန့်အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော Rabbi Avraham နှင့် မကြာသေးမီက ဆွေးနွေးမှုများကို ယနေ့ည ဆိုက်သို့ အပ်လုဒ်တင်ခဲ့သည် - ဆိုက်ပေါ်တွင် လွှင့်တင်ရန် Maikra မှ မရည်ရွယ်ဘဲ မလိုအပ်ဘဲ 'မူကြမ်း' အဖြစ် သဘောထားသင့်သည်၊ စည်းလုံးညီညွတ်သော ကောက်ချက်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။
နားလည်မှုလွဲမှားမှုအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးထားသလိုပဲ၊ အရာတွေက ဆိုက်ကိုအစား ပုံမှန်အီးမေးလ်ဆီရောက်သွားတယ်လို့ မှားပြီးထင်ခဲ့တာ၊ ဆိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဟောပြောချက်ကနေ သွေဖည်သွားတဲ့အရာတွေကို မတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် သူတို့ကို ထပ်ဆင့်ပို့လိုက်တယ် (အချိန်နဲ့တပြေးညီ၊ ) site သို့ upload တင်ရန်။ အခုမှ လာတက်ကြတာဆိုတော့ အခုပဲ ငြင်းတယ်။ ပြီးတော့ တကယ်က ငါတို့ကြားက နောက်ဆုံးပို့စ်တွေက ဒီနေရာအတွက် ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ငါသိလိုက်တဲ့အခါ ငါမတင်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထပ်ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။
ယုံကြည်ထိုက်သော ဘောဂဗေဒပညာရှင် ဒဲဘစ်ချမာဒါ ကဲ့သို့ ဉာဏ်ပညာနှင့် သိပ္ပံပညာနှင့် ပြည့်စုံသော ပညာရှိ အရှင်ဘုရား MDA အား Torah ကို လေ့လာ၍ သွန်သင်ဆုံးမကာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ မှန်ကန်စွာ ဂုဏ်ပြုထိုက်သော သရဖူကို ဆောင်းတော်မူပါ- ဟေဒါမြို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ ရောက်ရလတ္တံ့၊ နှင့် Torah နှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် တိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရပ်ရွာ၏အမြင်ကို လင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ - ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း၊
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသရေးတွေမှာ ကြီးလေးတဲ့ ငွေကြေး ကုန်ကျမှု ပါ၀င်တဲ့ ပြဿနာကို မြို့တော်က မှန်ကန်စွာ တောင်းဆိုမှာ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့ကို လိုအပ်သူတွေကို ဟန့်တားပြီး သူတို့ကို ဇွဲရှိဖို့ ခက်ခဲစေတယ်။
Kochav Hashahar နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ လိုအပ်သူများအတွက် မိသားစုနှင့် ဇနီးမောင်နှံများအတွက် စိတ်ရောဂါကုထုံးများကို ထောက်ပံ့ကူညီသည့် 'Chaim Shel Tova' (Rabbi Natan Shalev, Rabbi Natan Shalev, Mevoot Jericho) က ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းဖြင့် အဖြေတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်နှင့် နေရာဒေသတိုင်းတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးရန်နှင့် တစ်ဦးချင်းနှင့် မိသားစုအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အားပေးကူညီရန်နှင့် အထောက်အကူပြုမည့် အလားတူရန်ပုံငွေများကို ထူထောင်ရန် ထိုက်တန်ပါသည်။
လုလင်သည် ယုဒပြည်၌ ထောင်နှင့်ချီသော စကားတို့ကို လက်နှင့် ထောက်၍၊
Damchavi Kida ၊ လေးစားစွာဖြင့် S.C. Levinger
Shalev နှင့် Yesha Rab သည် မစ္စတာ Chen Chen အား ၎င်း၏ဆန္ဒနှင့် မှတ်ချက်များအတွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန်တိုင်းထဲတွင် ကပ္ပလီတုတ်ကို ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကပ္ပတိန်၏တုတ်ကို လွှဲရန်လုပ်ထားသည်။ ရောမလူတစ်ယောက်က ဓားနဲ့ အာယာကို ပြောပြရင် ဂျေရုဆလင်ကို တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဆောက်တယ်ဆိုတာ သိပါ။
အလင်း၏အလင်း၌ Lior ကိုငါတို့အနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစီရင်ထုံးများအားလုံးမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ယောက်ျားက သူ့အစ်ကိုကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောလိမ့်မယ်၊ သားတို့ သမီးတို့ ရုန်းကန်နေတဲ့ ဝန်ကြီး။ ပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ ကောင်းကောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးမယ့် နှိပ်စက်ခံရတဲ့သူအတွက် လျှောက်လွှာတင်မယ်။
ဆောင်းပါးများတွင် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးချက်ကို နွေဦးရာသီတွင် တွေ့ရလိမ့်မည်-
Roni Schur, 'စိတ်ဝိညာဉ်အကြံဉာဏ်' တွင် (ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောထားများကို ကုသရာတွင်)၊ Tzohar XNUMX (XNUMX)၊ 'Asif' website တွင် ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
အရှင်ဘုရား Azriel Ariel 'မည်သူမဆို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။ (တုံ့ပြန်မှု) ', there, there;
ဒေါက်တာ Baruch Kahana၊ 'ဘာသာရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြောင်းပြန်သဘောထားများ'၊ Tzohar XNUMX (XNUMX)၊ 'Asif' ဝဘ်ဆိုက်တွင်။
ဒေါက်တာ Zvi Mozes၊ 'ပြောင်းပြန်သဘောထားများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိရောက်စွာ ကုသခြင်း'၊ 'Root' ဝဘ်ဆိုက်တွင်။
ကုသမှုအမျိုးအစားများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အနေအထားများအကြောင်း အသေးစိတ်အကျဉ်းချုပ် - Wikipedia၊ 'ပြောင်းလဲခြင်းကုထုံး' တွင် ထည့်သွင်းပါ။
"ရဗ္ဗိတွေရဲ့စကား" နဲ့ အစ္စရေးမှာရှိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို အခု ကျွန်တော် လက်ခံရရှိပါပြီ-
လူ့စိတ်ကို နက်နဲစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးဖြင့် ကူညီရန် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအနေနှင့် LGBT အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီက ရဗ္ဗိများ၏ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောဆိုမှုများကို ကန့်ကွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၊ "သွေဖည်ခြင်း"၊ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုလိုအပ်သော မသန်စွမ်းမှု" သည် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လွတ်လပ်မှုကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည် - နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် လက်ခံထားသော ခေတ်မီအနေအထားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဤအတွက် လေ့ကျင့်မသင်ကြားရသေးသော ရဗ္ဗိဆရာများနှင့် ပညာတတ်များက 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်း' ပေးခြင်းသည် အခြေခံအားဖြင့် မှားယွင်းနေပြီး ထိုကဲ့သို့သော ထင်မြင်ယူဆချက်များကို စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် လူငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဘဝများကိုပင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် မြင်ပါသည်။
Yossi Triast (ဥက္ကဋ္ဌ) - အစ္စရေးရှိ Psychoanalytic Society ကိုယ်စား
ပြီးတော့ အဲဒီလူက လူမိုက်လား၊ လူလိမ်လားလို့ တွေးမိတယ်။ သူရေးတဲ့စာက လုံးဝကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့တယ်။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းသည် ဖောက်ပြန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းအတွက် ရာထူးတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းမှာ သူ့တွင်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိပညာနှင့် အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် အရူးဖြစ်ပုံရသည်။ တန်ဖိုးအစီအစဉ်တစ်ခုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦးထုပ်ကို တမင်တကာ အမြတ်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ထို့နောက်တွင် သူသည် လိမ်လည်သူဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများကြားတွင် ရွေးချယ်ရန် စာဖတ်သူအား ကျွန်ုပ်ထားခဲ့ပါ။
20 Tammuz 07 - 2020 14:43 အချိန်
သေချာပေါက် အရူးတစ်ယောက်လို့ မထင်ပါဘူး။ အဲဒီမှာ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်တစ်ခု ရှိနေပြီး အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေမှာလည်း ပေါ်လာတယ်။ တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ အချိန်အလုံအလောက်ရရင် အဲဒါက စစ်မှန်ပြီး မကုန်ခန်းနိုင်ဘူးလို့ ထင်လာလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါကတော်တော်လေးဖြစ်သွားတာ။
20 Tammuz 07 - 2020 15:00 အချိန်
အဲဒီမှာ Pingback လို့ဖြေတယ်။
လက်ထောက်- ကျွမ်းကျင်သူကို အသိအမှတ်ပြုပါ။ စည်းကမ်းနှင့်အသေးစိတ်
Doron ဂရန် Lehavah သည် လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလား။ (၄၈၄)၊
မီကင်း ဂရန် Beer Hagola ပညာရှိတို့၏ တရားဒေသနာ ဖြေဆိုခြင်း။